Apple Park waa dhismaha ugu qaalisan Mareykanka | Waxaan ka socdaa mac
Haddii aad si joogto ah ula socotey shaqooyinka dhismaha ee Apple, hubaal waxaad ka warqabtaa waqtiga ay shaqooyinku qabteen illaa inta ay ka dhammeystirmayaan oo aan ku jirno, dhisme bilaabmay ku dhowaad 10 sano ka hor oo Steve Jobs uu ku lahaa aad muhiim u ah qayb ka mid ah naqshadeynta, in kastoo Intii lagu jiray labadii sano ee la soo dhaafay Johny Ive shaqsiyan wuxuu daryeelay dhammeystirka.
Kharashkii ugu dambeeyay ee Apple Park ay ku baxday, wax ka yar 5.000 milyan oo doolar, iyadoo lagu xisaabtamayo dhulkii uu lahaa HP, ka dhig dhismaha ugu qaalisan ee abid laga sameeyo Mareykanka, ee ka sarreeya astaamaha caanka ah ee Las Vegas, dawladaha kubbadda cagta ama Xarunta Ganacsiga Adduunka ee cusub.
Dhismooyinka ugu qaalisan ee aan ka heli karno Mareykanka, waxaan kaheleynaa kuwa soo socda, kuwaas oo qiimahooda lagu hagaajiyay sicir bararka iyo kharashyada dhismaha ee hadda jira.
Cosmopolitan-ka Las Vegas waxaa ku baxday 4.24 milyan oo doolar.
Xarunta Ganacsiga Dunida ee cusub oo kharashkeedu kor u kacay ilaa 3.920 milyan.
Dalxiiska Wynn ee Las Vegas oo leh 3.280 milyan.
Sheeko-sheekada Bellagio ee filimadii Brad Pitt iyo George Clooney waxay gaaraysay 2.330 bilyan.
Trump Taj Mahal oo ku yaal magaalada Atlantic City lacag dhan $ 2.000 billion.
Garoonka Yankee Stadium ee magaalada New York wuxuu gaarayay 1.660 bilyan oo doolar.
Kharashka dhismaha garoonka Santa Clara Levi wuxuu gaarayay 1.300 bilyan oo doolar.
Dhamaan dhismayaashaani waxay noqdeen kuwa ugu qaalisan ee ilaa iyo hada la qabtay. Waqtigaan la joogo, Mareykanku wuxuu leeyahay 8 dhisme oo ka mid ah 25-ka ugu qaalisan ee ilaa hadda laga qabtay adduunka oo dhan, waana halka aan ka arki karno sida Apple's Apple Park ayaa kaalinta koowaad ka galay dalka.
Laakiin beerta tufaaxa ma aha dhismaha ugu qaalisan ee aan ka heli karno adduunka oo dhan. Saddexda dhisme ee qaaliga ah ee aan ka heli karno adduunka oo idil waxay u dhigmaan hudheel ku yaal Bariga Dhexe iyo laba warshad tamarta nukliyeerka ah.
Hoteelka Abraj al Bait iyo dhismaha la degan yahay waxaa lagu qiyaasay $ 15.490 bilyan.
Warshadda tamarta nukliyeerka ee Tokamak ee ku taal Faransiiska, waxaa ku baxday 14.250 milyan oo doolar.
Warshadda tamarta Nukliyeerka ee Olkiluoto oo ku taal jasiirad ku taal Finland waxay ku kacday 9.220 bilyan oo doolar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple Park waa dhismaha ugu qaalisan Maraykanka
Apple waxay iibisaa fiilooyinkeeda Thunderbolt 3 USB-C